सरिता गिरी - कान्तिपुर समाचार
लेखक रंगकर्मी हुन् ।
सरिता गिरीका लेखहरु :
ग्रिनरुमका ‘हरिया’ सम्झना
ग्रिनरुम त्यो ठाउँ हो, जहाँ कलाकारहरू रङ्गमञ्च छिर्नुअघि बस्छन्, शृङ्गार गर्छन् र नाटक नसिद्धिउन्जेल ओहोरदोहोर गरिरहन्छन् । दर्शकले नाटक सम्झिएलान्, अभिनय सम्झिएलान्, तर ग्रिनरुम ? कसले सम्झिएलान् ग्रिनरुमलाई ? अनगिन्ती सम्झनाका साक्षी ग्रिनरुमलाई ?
सहर न तिम्रो थियो न मेरै
विश्वभरि त्रास फैलाइरहेको कोरानाको समाचार अक्सर म मामाको पसलमा बसेर साथीहरूसँग गफिँदै चियाको चुस्की लिँदै पढ्थें । दिनहरू बिस्तारै घिस्रिँदै थिए । यो भाइरसले नेपाल–यात्रा पनि गर्ला ? चिन्ता र चासो हाम्रो चिया गफमा सधैं हुन्थ्यो ।